Etu ị ga - esi wedata Mmetụta Ọchụchọ Mgbe I Na - akwaga na ngalaba Ọhụrụ | Martech Zone
Monday, June 20, 2016 Sunday, Jenụwarị 29, 2017 Douglas Karr
Dị ka ọ dị n'ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eto ma dị mkpa, anyị nwere ndị ahịa na-atụgharị aha ma na-akwaga na ngalaba ọzọ. Ndị enyi m na-eme njikarịcha njin ọchụchọ na-atụ egwu ugbu a. Ngalaba na-achịkwa ikike karịa oge ma na-apụ na ikike ahụ nwere ike ịgbanye okporo ụzọ gị.
Ọ bụ ezie na njikwa Google Search na-enye a mgbanwe nke ngalaba ngwá ọrụ, ihe ha na-eleghara ịgwa gị bụ etu usoro a si egbu mgbu. Ọ na-ewute… ọjọọ. Emere m ngalaba gbanwere ọtụtụ afọ gara aga na Marketing Tech blog iji kewapụ akara site na ngalaba aha m, ma funahụrụ m ihe kachasị mkpa isiokwu m dị na ya. O were obere oge iji nwetaghachi ahụ ike ahụ m nweburu.
Nwere ike ibelata mmetụta ogo ogo ọchụchọ site na ịme ụfọdụ ọrụ ịhazi na post-egbu, n'agbanyeghị.
Nke a bụ Nhazi atụmatụ SEO
Nyochaa ngalaba ọhụrụ backlinks - Ọ siri ike ịnweta ngalaba na-ejibu ya. You maara ma ejirila ngalaba ahụ ma ọ bụ na ọ bụghị na mbụ? O nwere ike ịbụ otu nnukwu ụlọ ọrụ SPAM ma gbochie ya site na engines ọchụchọ kpamkpam. Won't gaghị ama ruo mgbe ị na-eme nyocha backlink na ngalaba ọhụrụ ma wepu njikọ ọ bụla na-enyo enyo.
Nyochaa backlinks dị ugbu a - Tupu ị kwaga na ngalaba ọhụrụ, gbaa mbọ chọpụta ihe niile ị nwere na ntanetị ugbu a. You nwere ike ịme ndepụta lekwasịrị anya ma mee ka ndị otu PR gị kpọtụrụ saịtị ọ bụla jikọrọ gị ka ị gwa ha ka ha melite njikọ ha na ngalaba ọhụrụ ahụ. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị nwetara naanị aka ole na ole, ọ nwere ike ibute nlọghachi na ụfọdụ isiokwu.
Nnyocha saịtị - ohere bụ na ị mepụtara akụ na njikọ dị n'ime ya niile metụtara ngalaba gị ugbu a. You'll ga-achọ ịgbanwe njikọ ndị ahụ niile, onyonyo, PDF, wdg, ma hụ na a na-emelite ha ozugbo ha na saịtị ọhụrụ ahụ ga-ebi. Ọ bụrụ na saịtị ọhụrụ gị dị na gburugburu ebe a na-echekwa (akwadoro nke ọma), mee ndezi ndị ahụ ugbu a.
Chọpụta peeji akwụkwọ ị kacha sie ike - kedu isiokwu ị họọrọ na peeji nke? Ndị a bụ ọkwa ị ga - achọ nyochaa iji ngwa ọrụ dịka ndị mmekọ anyị ụlọ nyocha gShift. Nwere ike ịchọpụta akara ngosi aha, mkpụrụedemede mpaghara, na isiokwu isiokwu ị na-agbago wee tụọ otu ị si agbagha azụ mgbe ngalaba gbanwere.
Dezie ngalaba nke ọma - You'llchọrọ 301 redirect URL ochie na URL ọhụrụ na ngalaba ọhụrụ maka ntakịrị mmetụta. Chọghị ka onye ọ bụla na-abịa na ihu ala ngalaba ọhụrụ gị na-enweghị ọkwa ọ bụla. Ọ bụrụ na ị lara ezumike nká ụfọdụ peeji ma ọ bụ ngwaahịa, nwere ike ị chọrọ weta ha a ngosi peeji na-ekwu okwu banyere mbọn mgbanwe, mere ụlọ ọrụ mere ya, na ebe ha nwere ike nweta enyemaka.
Debanye aha ọhụrụ na Webmasters - Ozugbo abanye na Webmasters, denye aha ọhụrụ ahụ, ma nyefee saịtị saịtị XML gị ka saịtị Google ahụ kpochapụ saịtị ọhụrụ ahụ ozugbo na ngwa ọrụ ọchụchọ na-amalite imelite.
Egbula Change nke Adreesị - Gaa site na mgbanwe nke ngwa ọrụ adreesị iji mee ka Google mara na ị na-akwaga na ngalaba ọhụrụ.
Nyochaa na nchịkọta na-arụ ọrụ nke ọma - Nbanye nchịkọta ma melite URL ahụ. Ọ gwụla ma ị nwere ọtụtụ ntọala omenala ejikọtara na ngalaba ahụ, ị ​​ga-enwe ike idobe otu ihe ahụ nchịkọta nyochaa maka ngalaba ahụ ma nọgide na-atụle.
Gwa saịtị na-ejikọ na ngalaba ochie ? Oge erugo izipu ọdịnaya ndị ahụ ma hụ na ha na-emelite akụkọ ha site na ozi kọntaktị gị na akara ngosi gị. Ka ị na-enwekwu ihe ịga nke ọma ebe a, ọ ka mma ọkwa gị ga-alaghachi.
Biputere Mbugharị Mbugharị - Oge ịme nyocha ọzọ nke saịtị ahụ na nyocha abụọ ị nweghị njikọ njikọ ọ bụla na-atụ aka na ngalaba ochie, onyonyo ọ bụla nwere aha, ma ọ bụ njikọ ọzọ ọ bụla nwere ike imelite.
Nyochaa ọkwa na Organic Traffic - Nyochaa ọkwa gị na ahịa okporo ụzọ iji hụ ka ị na-esi na ngalaba gbanwee.
Mee ka Mgbalị Ọha na Ọha gị - Ọ bụ oge na-aga mgbe ọ bụla byline i nwere ike inwe aka gị ugbu a na-enyere gị ụlọ ọrụ inwetaghachi ya search engine ikike na ọnụnọ. Chọrọ ọtụtụ nkata n’ebe ahụ!
M ga-ekwusi ike maka usoro nke ọdịnaya dị elu edepụtara iji mee nnukwu ntutu. Site na nkwuputa akara na ihe ọ pụtara maka ndị ahịa ugbu a na infographics na ọcha iji rịọ nnukwu nzaghachi sitere na saịtị dị mkpa.
Tags: Mbugharị ngalabagoogle webmastersngalaba ọhụrụMbugharị ngalaba ọhụrụ
Ndị a bụ ezigbo ndụmọdụ! Ọ bụ n'ezie bummer mgbe ọnụahịa gị ga - akwụ ụgwọ ga - agbadata mgbe ị na - abanye na ngalaba ọhụrụ. Ọ dị ka isutụ ọnụ na-arụsi ọrụ ike gị niile wee malite ịme ya ọzọ.